राष्ट्रियसभा सांसदमा मनोनित हुदै हिमानी ! पूरा हेर्नुहोस्। – पुरा पढ्नुहोस्……
राष्ट्रियसभा सांसदमा मनोनित हुदै हिमानी ! पूरा हेर्नुहोस्।
काठमाडौं । पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ईच्छा गरेकी छिन् । पछिल्लो समय संविधान कार्यान्वयन भएर परिवर्तन संस्थागत हुने भएपछि तत्काल राजतन्त्र फर्काउन गार्हो हुने भन्दै यही व्यवस्थालाई उपयोग गर्न हिमानीलाई निकटस्थहरुले सुझाव दिएका छन् ।
निर्मल निवास निकट स्रोतका अनुसार हिमानी ट्रस्टका नाममा सामाजिक सेवामा सक्रिय हिमानीले पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्न ईच्छुक रहेको संकेत गरेकी छिन् । उनले राष्ट्रिय सभाको सांसदमा मनोनीत हुनसके राजनीतिक कोर्स अगाडि बढाउन सहज हुनेतर्फ संकेत गरेकी छिन् ।
निर्मल निवासका निकटस्थहरुले हिमानीलाई राष्ट्रिय सभा सांसद बनाउनेबारे दलका नेताहरुसंग छलफलको वातावरण बनाउन थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार थाइल्याण्डमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग भेट हुदा हिमानीले राजनीतिमा आएर जनताबाट अनुमोदित हुन तयार रहेको बताएकी थिइन् । त्यसका लागि पार्टी खोल्ने भन्दा पनि तत्काललाई तटस्थ भूमिकाबाट अघि बढ्न हिमानीले चाहेको बताइन्छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जनामा परेर राष्ट्रियसभा सांसद बन्न हिमानीले रुची बढाएपछि शाही पाश्र्ववर्तीहरुले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरुसंगको भेटवार्ता तिव्र पारेका छन् ।
Prevउपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बिचल्ली परेका आमा–छोरालाई पूर्व सांसदले फर्काए घर
Nextनेपाल भारत सीमामा काँडेतार लगाउन अखिलको माग पूरा पढ्नूहोस।
तेरिया मगर अब फिल्ममा देखिने, को हुनेछन् उनको नायक ?
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरून्। हेर्नुहोस आजको राशिफल..
अमेरीकी डलरको भाउ सहित बढ्यो यी विदेशी मुद्राको भाउ..